သွေးတိုးခြင်းအတွက် စိတ်ချရသောဆေးဝါးများ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » သွေးတိုးရောဂါ » သွေးတိုးခြင်းအတွက် စိတ်ချရသောဆေးဝါးများ
ရေးသားသူ Kyaw Thura Htun ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ hellosayarwon.
သွေးတိုးကိုကုသဖို့​ဆေး​တွေ​သောက်​ရ​တော့မယ်​ဆိုရင်​ အဲဒီ​ဆေး​တွေက အကျိုးသက်​​ရောက်​မှု​ကောင်း​ကောင်းရှိဖို့လိုပါတယ်​။ တချို့​ဆေး​တွေကို​ရှောင်​ခြင်းကလည်း သင့်​ပန်းတိုင်​ကို​ရောက်​​စေပါတယ်​။
တချို့​ဆေး​တွေကသင့်​ကို​သွေးတိုး​စေပြီး တချို့က သင့်​​သွေးတိုး​ဆေး​တွေကို​နှောင့်​ယှက်​ပြီး ​ဆေးစွမ်းကိုထိခိုက်​​စေပါတယ်​။ အခု​ပြောပြသွားမှာက သင့်​​သွေးတိုးကိုပိုဆိုး​စေတဲ့ ​ဆေး​တွေအ​ကြောင်းပါ။
NSAID ဆိုတာ Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs ကို​ပြောတာပါ။ ဒီ​ဆေး​တွေက နာကျင်​ခြင်းကို ​လျှော့ချဖို့နဲ့ ​ရောင်​ရမ်းငြ်းကို ​လျှော့ချဖို့ သုံးပါတယ်​။ ဥပမာ – အဆစ်​​ရောင်​ခြင်း။ ဆရာဝန်​​တွေက လူာ​တွေကို NSAIDs ​ပေး​လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီ NSAIDs ​ဆေး​တွေက ​သွေးတိုးကိုပိုမြင့်​​စေပါတယ်​။
ဘာ​ကြောင့်​လဲဆို​တော့ သူကကိုယ်​​တွင်းရည်​​တွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး ​ကျောက်​ကပ်​လုပ်​ငန်းစဉ်​ကို​လျှော့ချ​ပါတယ်​။ သူတို့က ဒါ​ကြောင့်​ သူတို့က နှလုံးနဲ့ ​ကျောက်​ကပ်​​တွေကု ဖိနှိပ်​ပါတယ်​။ တချို့ NSAIDs ​တွေထဲမှာ aspirin, ibuprofen နဲ့ naproxen ​တွေပါဝင်​ပါတယ်​။
​ချောင်းဆိုးနဲ့ အဖျား​ဆေး​တွေမှာ နာကျင်​မှုကို ​လျှော့ချဖို့ NSAIDs ​တွေပါဝင်​ပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​ သူတို့က ​သွေးတိုး​စေပါတယ်​။ ဒါ့အပြင်​ ​ချောင်းဆိုးနဲ့ ​ဖျေား​ဆေး​တွေမှာ ရင်​ကျပ်​​ပျောက်​​ဆေး​တွေပါပါတယ်​။ ရင်​ကျပ်​​ပျောက်​​ဆေး​တွေမှာ ​သွေးတိုးနဲ့ နှလုံးခုန်​နှုန်းကို မြင့်​​စေပါတယ်​။
ဒါ့​ကြောင့်​ သင့်​အ​နေနဲ့ NSAIDs ပါတဲ့ေးနဲ့ ရင်​ကြပ်​​ပျောက်​​ဆေးပါတဲ့​ဆေး​တွေကို​ရှောင်​သင့်​ပါတယ်​။ သင့်ဆရာဝန်​ကို အဖျား၊ တုတ်​​ကွေးနဲ့ နှာရည်​ယိုနှာပိတ်​ခြင်းနဲ့ ပတ်​သက်​တဲ့ပြသနာ​တွေကိုကုသဖို့ ဆရာဝန်​ဆီကအကြံ​တောင်းနိုင်​ပါတယ်​။ ဥပမာ – antihistamines နဲ့ nasal sprays ​တွေဘဖြစ်​ပါတယ်​။
တချို့​ခေါင်းကုက်​​ပျောက်​​ဆေး​တွေကသင့်​ဦး​ခေ့င်းက ​သွေး​ကြော​တွေကို ကျုံ့​စေပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​ သူက​ခေါင်းကိုက်​​ပျောက်​​စေပါတယ်​။ ဒါ​ပေမ့်​ သူက​သွေးတိုးကို ​ဘေးဖြစ်​နိုင်​တဲ့ထိ မြင့်​​စေပါတယ်​။
အစားစားချင်​စိတ်​​ပျောက်​​စေတဲ့​ဆေး​တွေဟာ နှလုံးခုန်​နှုန်းမြင့်​​စေပြီး ​သွေးတိုး​စေပါတယ်​။ တချို့ အဆီကျ​ဆေး​တွေက သင့်​နှလုံး​ရောဂါ ကိုပိုဆိုး​စေပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​ ဒီ​ဆေး​တွေကို သင်​​ရှောင်​သင့်​ပါတယ်​။
​နောက်​ဆုံးအ​နေနဲ့ ​သွေးတိုးမြင့်​​နေတဲ့ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​တွေဟာ သူတို့ရဲ့​သွေးဖိအားကို ​သွေးတိုးဆန့်​ကျင်​တဲ့​ဆေး​တွေသုံးပြီး​လျှော့ချနိုင်​ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​နေစဉ်​ ဘယ်​​ဆေးကအထိ​ရောက်​ဆုံးလဲဆိုတာ​တော့ မသိရ​သေးပါဘူး။
​သွေးတိုးဆန့်​ကျင်​တဲ့​ဆေး​တွေရဲ့ရည်​ရွယ်​ချက်​က ရုတ်​တရက်​​သွေးတိုးကျခြင်း​ကြောင့်​ ​ခေင်းမူးခြင်း စိတ်​ဖိစီးခြင်းတို့ မဖြစ်​​စေဘဲ မိခင်​​ရောက​လေးကိုပါ ​ဘေးမဖြစ်​​စေဘဲ ​သွေးတိုးကိုမြန်​မြန်​​လျှော့ချ​ပေးဖို့ပါ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝငျဘာ 9, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝငျဘာ 9, 2017
High Blood Pressure and Drug Safety. http://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/high-blood-pressure-medication-safety#1. Accessed on March 19, 2017.
Medications That Cause High Blood Pressure. http://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/guide/medications-cause#1
ခေါင်းမူးမှ သွေးတိုးတာ မဟုတ်ပါ
သွေးတိုးရောဂါအတွက် ဘယ်လိုပုံစံစားသောက်ရမလဲဆိုတာ သင်သိပါသလား
သင် လေ့ကျင့်​ခန်း ဘယ်​​လောက်​လုပ်​ဖို့ လိုအပ်​လဲ
သင့်ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ဘယ်လောက်မှာ ထိန်းထားမလဲ